चन्द्र ढकालको अमलाचौरदेखि महासंघको नेतृत्वसम्मको यात्रा
काठमाडौँ । भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीवासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो। चराहरु ब्युँझिएर बास ...
'मेरो सफलताको सबैभन्दा दरिलो टेको भनेको लगाव र परिश्रम नै हो'
काठमाडौँ । भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीवासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो । चराहरु ब्युँझिएर ब...
को हुन् महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित ढकाल ?
काठमाडौं । नेपाली उद्योग र व्यवासायको क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्ति हुने चन्द्रप्रसाद ढकाल । बागलुङको अमलाचौरमा विक्रम संवत २०२२ सालमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका चन्द्रप्रसाद ढकालको अहिलेको पहिचान मुल...
file photo –रमेश लम्साल काठमाडौँ । भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीवासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दि...
चन्द्र ढकालको अमलाचौरदेखि व्यावसायिक नेतृत्वसम्मको यात्रा काठमाण्डुपाटी प्रकाशित मिति : 29 November, 2020 काठमाण्डु – भनिन्छ, बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघ...
चन्द्रप्रसाद ढकाल : ‘बैंकको जागिरेदेखि व्यवसायीहरुको नेतृत्वसम्म’
काठमाडौं ।बाग्लुङ जिल्लाको बलेवा, अमलाचौरमा वि.सं. २०२२ सालमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका थिए, चन्द्रप्रसाद ढकाल । उनी नेपाली उद्योग र व्यवसायको क्षेत्रमा मुलुककै पहिचान बनाउने सफल व्यवसायी हुन् । उन...
चन्द्र ढकालको यात्रा: अमलाचौरदेखि व्यावसायिक नेतृत्वसम्म
काठमाडौँ । भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीवासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो । चराहरु ब्युँझि...
काठमाडौँ। भनिन्छ- बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीवासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो। चराहरु ब्युँझिएर बास बस...
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीबासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो । चराहरु ब...
एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित, एशोसिएट र वस्तुगतले पछाडि पारे प
काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल निर्वाचित भएका छन्। महासंघको शनिबार भएको ५४औं वार्षिक साधारणसभाबाट उनी निर्वाचित भएका हुन्। ढकालका प्रतिस्पर्धी किशोरकुम...
उद्यमी चन्द्र ढकाल : अमलाचौरदेखि व्यावसायिक नेतृत्वसम्म
काठमाडौँ । भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ : ३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीवासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो । चराहरु ब्युँझिएर...